flender gearbox catalog, flender gearbox Manuel, flender gearbox zvikamu, flender gearbox supporter muIndia, flender gearbox kugadzira, flender gearbox kumaodzanyemba eAfrica, siemens flender gearbox,
Industrial Helical Magiya emabhokisi
Yakakura Duty Gear bhokisi, Bevel Gearbox, giya rekumhanyisa redhiyo, Kuendesa magiya zvikamu, yakasimba hollow shaft gearbox, helical magiya, flender gearbox Industrial Helical, Helical bevel Gear Units
@Type Dhizaina (isina mota)
P: P akateerana helical giya rinomhanya rekudzora
3: Kwete. Pamatanho, 1,2,3,4.
S: Nzira yekubuda. S-Solid shaft, H-hollow shaft, D-Hollow shaft ine shrink disk.
H: Inokwira nzira, H-Yakasarudzika, M-Yakamira isina tsoka, V-Vertical
8: Model nhamba yegearbox
80: Kuwedzerwa muyero
A: Dhizaini yekukwira nzira
Sogears mhando Flender gearboxes dzinopa turbo yakafanana shafts uye inosanganisa magiya mayuniti ane magetsi emagetsi kana emhepo motors nevamwe vamwe. Nedu chaiko kugadzira uye kudzora zviyero, rimwe nerimwe giya rinobatsirwa kubva mukushandisa kwakakura senge simende, kuchera, kufambisa, kurapwa kwemvura, indasitiri yemapepa nezvimwe. Tine makore anopfuura mashanu mushure mekutora nzvimbo nana Siemens AG, FLENDER AG. Iwo maJenareta mabhokisi emabhokisi anogona kushandiswa kune yakaderera-mutengo kugadzirwa kwemagetsi ari muchikepe. Iwo anoshandiswawo neakaderera-kumhanyisa dhiziri enjini uye anogona kushandiswa.
Mune Flender gearbox tsananguro:
ivo H akateedzera yakakwirira simba maindasitiri gearbox (yakakwirira simba uye yakakwirira torque)
1. HB yakajairika maindasitiri magiya bhokisi anotora chimiro chemuyero webhokisi muviri, hombe makabati pamusoro nzvimbo uye yakakura fan, cylindrical gear uye spiral bevel gear. Iyo yekumberi yekuchetedza gadziriro inotorwa kuita kuti tembiricha isimuke, kuderedza ruzha uye rakavimbika mashandiro emuchina wese. Bonde rinovandudzwa uye simba rekutapurirana rinowedzerwa.
2. Iyo yekumaindasitiri gearbox inotora iyo yakasarudzika dhizaini yekuziva iyo yakajairika pekugara parallel shaft uye orthogonal shaft. Mhando dzezvikamu dzinoderedzwa uye zvakatemwa nemhando zvinowedzerwa.
3, iro giya bhokisi rine 3 kusvika 26 mhando ratidziro, huwandu hwematanho ekutapurirana matanho ndeye 1 kusvika 4, uye nekukurumidza mwero ndeye 1.25 kusvika 450.
4. Kuisikidza nzira: hwaro kuisa, hollow shaft kumisikidzwa, swing base kuisirwa, uye torque ruoko kumisikidza.
5. Input maitiro: mota yekubatanidza flange uye shaft yekuisa.
6. Output mode: shaft yakasimba ine flat kiyi, hollow shaft ine flat kiyi, hollow shaft nekuwedzera inosanganiswa, hollow shaft ine spline yakabatana, shaft yakasimba ine spline yakabatana uye shaft yakasimba ine flange zvakabatana.
7, inogona kuve ne backstop zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Yakasanganiswa neiyo R uye K yekutevedzana kuti uwane yakakurumidza mwero.
Speed ​​ratio huwandu: H akateedzera 1.25 ~ 450, B akatevedzana 5 ~ 400
Torque mhando: H akateedzera 2 ~ 900 kNm, B akatevedzana 5.8 ~ 900 kNm
Magetsi masimba: H akateerana 4 ~ 5000 kW, B akateedzera 2.8 ~ 3000kW
Uwandu hwemagetsi: Pamusoro kusvika 4800KW
Speed ​​yekubuda (r / min): 01- 1200
Panobuda Torque (NM): Pamusoro kusvika pa952000N.M
Nzira yekubuda: Hollow shaft ine keyed connection, shrink disk, yakatanhamara, shaft yakasimba nezvimwe.
Yakasarudzika modular dhizaina nyore kuyambuka nyika kugadzirwa, yakaderera stock, pfupi yekufambisa nguva.
Kubereka: China mureza. Asi SKF, FAG, NSK, TIMKEN, NTN, KOYO, C & U inogoneka kana zvichidikanwa
Yakakura kuburitsa torque, yekutanga yakatsetseka, yakanyanya kushanda, yehurefu hwehupenyu, yakatenderera uye yakatwasuka
Yakanyanya kuchena alloy simbi giya, yakasimba kuvhiringidza kupikisa, nhoroondo pasi magiya anovandudza mutoro wekuremerwa, kutonhora kuita uye ruzha kuderera.
Chisimbiso cheinoburitsa shaft chikamu chinogashira kaviri mafuta chisimbiso neakakwana mafuta ekubikisa kuramba.Rakavimbika kuiswa chisimbiso uye zvakanyanya kushanda kune indasitiri.
Yakachena kuchena chiwanikwa simbi giya, yakasimba kuvhunduka kuramba, maficha epasi magiya anovandudza mutoro kugona, kutonhora uye ruzha kudzikisira kuita, kugadzikana kutapurirana. Yedu Compact gearboxes ari emhando yepamusoro mabhokisi emabhokisi emadhiraivha akajairwa. Iyo mota yemagetsi inosanganiswa negearbox mune imwechete unit. Isu tiri sevhisi izere-yese, yese-in-imwe kugadzirisa & kuvaka zvakare nzvimbo inoshumira zvaunoda zvemagearbox mabhokisi akachinjirwa kune yako yekare Flender Gearbox kana avo vanoda Kugadziridza & Hard Chrome Plating Services.
Uchishandisa makore angangoita makumi matatu akabatanidzwa ehunyanzvi hwehunyanzvi hwegiya, Sogears pwoer kufambisa inogona kusevha, kugadzirisa uye kusimudzira chero giya rebhokisi regiya kusanganisira Flender brand. Isu tine makumi emakore ezviitiko mukugadziriswa kweFlender mhando giya mabhokisi evatengi nemaindasitiri vatengi pasi rese. uye isu tave tichikurumidza, sevhisi izere, nyanzvi yepasirese mu flender mhando giya bhokisi gadziriso yeFlender gearboxes.
• Conveyors & Chikafu Mashini • zvekufambisa michina
• Masanganisi • Bhachi & Kuchera • Zvirimwa zvehuku • Zvishandiso zvekuvaka
• Mapepa Mageti • Kudzokorodza Machina • Rotary Rinopa • Magetsi uye simba
Kusimudza, kusimudza • Harbour & kuvaka chikepe • Simende & zvinhu • Magetsi simba & simba
• Marasha emarasha • Tsvina yemvura Kurapa • indasitiri yemakemikari • veruzhinji vekusanganisa dhizaini
1. Iva nemakore mazhinji echiitiko chekugadzira.
2. Isu takagadzira, tine kodzero yakazvimirira yekutumira kunze, mutengo zvirinani, tinokwanisa kudzora kunaka uye nguva yekutumira.
3. Nyanzvi maainjiniya ekugadzira ako, kudhirowa, simbisa mhando yekugadzira kana zvisiri-zvigadzirwa.
4. Iwo mafoto uye mafirimu ekushandura maitiro achaudzwa kwauri.
5. Iyo nguva yeWaranti mwedzi gumi nemaviri.
Isu tiri Maindasitiri eGearbox Nyanzvi kubva kuChina, kutengesa kweiyo yakazara huwandu hweGearboxes seFlender. Isu tine Vashandi veVatengesi venyika dzese dzakanakisa mushure mekutengesa sevhisi. Kuvhiringidzwa kwemabhokisi edu emagetsi kunopindirana neFlender, yanga ichishandiswa kwemakore mazhinji mumaindasitiri nemumvura, semuenzaniso mumaindasitiri emakemikari, kuvaka ngarava uye musika wesimba remhepo. Stork Gears & nemisodzi yakawanda yemakumi emakore echiitiko mukugadziriswa kweFlender gearboxes eindasitiri uye yegungwa.
Mhando dzese dzerudzi urwu:
Mhando dzose dzerudzi urwu rweFlender's: